🥇 ▷ Galaxy Note 9: Maxey sameyn doontaa waxyaabaha cajiibka ah ee Bluetooth S-Pen? Galaxy Tab S4 ayaa shaaca ka qaaday (sawiro) ✅
Galaxy Note 9: Maxey sameyn doontaa waxyaabaha cajiibka ah ee Bluetooth S-Pen? Galaxy Tab S4 ayaa shaaca ka qaaday (sawiro)
Weligaa ilaa markii warkaasi sii daayay S-Pen isku dhafan ee Galaxy Note 9 ma noqon lahayd fududaato ficillo cusub oo nuqullo hore ah, laakiin waxay ku faani lahayd isku xirnaanta Bluetooth markii ugu horreysay, taageerayaal badan oo taxanaha ah ee Galaxy Note waxay bilaabeen inay ka yaabaan waxa Samsung la yimid ee ay ka yaabinayaan. Jawaabta koowaadna waxay umuuqataa inay ugu dambeyntii timid, Thanks to Galaxy Tab S4.
Laga soo bilaabo firmware ee mustaqbalka kiniiniga kala duwan ee weyn ee Kuuriyada – dhawaan si buuxda ayaa loo daadiyay – asxaabta Soo saareyaasha XDA awoodaan in laga soo saaro war bixin qaali ah kaliya ku saabsan Bluetooth S-Pen cusub. Looma saari karo in aaladda cusub sidoo kale lagu bixin karo qaab kiniiniga cusub, laakiin hadda aan xoog saarno howlaha daahfurka qalab firmware ah:
Xakameynta fog ee muusikada: waxay u muuqataa in S-Pen cusub ay awoodi doonto inay siiso amarro ku saabsan soo saarista muusikada, gaar ahaan inay bilawdo oo ay joojiso, laakiin waxay u badan tahay inay sidoo kale beddesho heesta, iyada oo leh taxane gaar ah oo cadaadis ah oo ka mid ah furaha isku dhafan.
Barta siideynta barta fog fog: Muuqaal kale oo qurux badan oo qurux badan oo loogu talagalay aaladda Bluetooth, laakiin sida ugu faa’iido badan xaaladaha badan. Kaliya riix batoonka S-Pen si aad sawir uga qaadid Galaxy Note 9.
Furitaanka fog ee aaladda: Waxay umuuqataa in S-Pen, markii aan lagu hakin gudaha gudaha Galaxy Note 9, ay awood u yeelan doonto inay si toos ah uga furnaato. Waqtigan xaadirka ah ma hayno wax war ah oo ku saabsan akhristaha farta-sawirka faraha oo lagu dhex-galiyey badhanka midabka, sidaa darteed waa inaan aragnaa sida khiyaanadan xiisaha leh dhab ahaantii u shaqeyn doono.
Hawlo badan oo kujira barnaamijyo badan: shaqooyinka laga heli karo S-Pen ee barnaamijyada ku rakiban Galaxy Note 9 waa la wanaajin doonaa, laakiin xitaa kiiskan ma jiraan faahfaahin ku saabsan.
Furitaanka barnaamijyada markay riixayaan badhanka: shaqadan sidoo kale waa mid muuqata, i.e. waxay kuu ogolaaneysaa inaad iskudarto furitaanka barnaamijka aan doorano cadaadis ama isku xigxigta cadaadis, ama howlaha gaarka ah ee S-Pen lafteeda.
AKHRISO: OPPO R15 Pro, dib u eegista
Warkani wuxuu noqon karaa mid keliya dhadhan waxa Samsung ay kaydin doonaan isticmaaleyaasheeda. Ballan laga bilaabo 9ka Agoosto, oo ah maalinta loo asteeyey kan weyn soo bandhigid rasmi ah Galaxy Note 9.
Xigasho: Kuwa soo saaray XDA